दक्षिण अफ्रिकामा नेपाली युवक अलपत्र | Jukson
दक्षिण अफ्रिकामा नेपाली युवक अलपत्र
वासिङ्टन डिसी— एक नेपाली युवा दक्षिण अफ्रिकाको डर्बानमा अलपत्र परेका छन्। सात महिनाअघि अवैध रुपमा रोजगारीका लागि त्यहाँ पुगेका ताप्लेजुङ घर भएका नैनाकुमार सान्बा लिम्बु र उनीसँगै गएका नेपाली युवासँग स्थानीय गुण्डा समूहको झगडा भएको थियो।
सो क्रममा उनले स्थानीय गुण्डाहरुलाई ज्यानमार्ने धम्की दिएका थिए। सोही कारण अहिले उनी लुकेर बस्नु परेको छ।
उनले आफू नेपाल फर्किन चाहेको बताएका छन्। उनीको नेपाल फिर्ताका लागि गैरआवसीय नेपाली संघले पहल सुरु गरेको जनाएको छ।
एनआरएनका कोषाध्यक्ष हिक्मत थापाले आफूले दक्षिण अफ्रिका स्थित नेपाली दूतावासलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेको अफ्रिका क्षेत्रीय संयोजक सुनिल कार्कीले बताए। उनलाई उद्धार गरी नेपाल पु¥याउन पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
बुलेटमा ग्यास छ, भर्न सिलिन्डर छैन
यस्तो बन्दैछ कलंकी–त्रिपुरेश्वर सडक
सार्क सम्मेलन तयारीको लागि केन्द्रले बजेट दिएन ।
संसदमा प्रधानमन्त्रीमाथि 'अपशब्द' प्रयोग भएकै हो ? सभामुख निरीह, प्रधानमन्त्रीको मुखै बैरी !
कैलाली २ मा वाम गठबन्धनका झपट रावल विजयी
कुनै दिन नेपालि फिल्म खेल्नेछु : गोविन्दा